जीवनमा बुद्धिमानी निर्णयहरू कसरी गर्ने? (भाग ३) – Word of Truth, Nepal
हामीले आफ्ना सबैभन्दा प्रिय आफन्तहरूलाई भन्दा उहाँलाई बढी प्रेम गर्नुपर्छ भनेर येशूले चेताउनी दिनुभयो। हेर्नुहोस् लूका १४:२६। हामीले आफ्ना सबैभन्दा नजिक र प्रिय आफन्तहरूलाई “घृणा” गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको मागको तात्पर्य के थियो? एउटा खण्डलाई अर्को खण्डसित तुलना गरेर यसको अर्थ बुझ्न सक्दछौं। यससित जाने एउटा खण्ड मत्ती १०:३७ लाई विचार गर्नुहोस्। हामीले आफ्ना बाबु, आमा, पत्नी, छोराछोरी, दाजुभाइ, दिदीबहिनीलाई घृणा गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको तात्पर्य यो थियो कि हामीले उहाँलाई अरूहरूलाई भन्दा ज्यादै बढी प्रेम गर्नुपर्छ। हाम्रो स्नेहहरूमा उहाँलाई एकदमै पहिलो स्थानमा राख्नैपर्छ र अरू सबै कुरा भन्दा उहाँलाई नै खुशी पार्न हामी जिउनुपर्दछ। पारिवारिक सम्बन्धहरू महत्त्वपूर्ण छन् र परमेश्वरको वचनले हामीलाई आफ्ना प्रियहरूको हेरविचार गर्नलाई निर्देशनहरू दिएको छ (१ तिमोथी ५:८; कलस्सी ३:१८-२१)। त्यसो भए तापनि परमेश्वरको इच्छा र कामले कुनै पनि मानवीय सम्बन्धले भन्दा अग्रस्थान लिन्छ।
धेरैजना अविश्वासीहरूले यही पाप गर्दछन् र यसकै कारण नरकमा पर्दछन् (“डराउनेहरू”, प्रकाश २१:८)। नरकमा पुग्ने धेरैजनाले उनीहरू अरू मानिसहरूले के सोच्लान् भन्ने डरले त्यहाँ पुगेका हुन् भनेर भन्नेछन्।
युवाहरूले धेरैपटक मान्छेको डर मान्ने पाप गर्दछन्। परमेश्वरले उनीहरूलाई पवित्रताको र सेवाको जीवनमा बोलाइरहनुभएको छ भनेर थाहा गरेर पनि तिनीहरू साथीभाईहरूको नजरमा छुट्टै देखिन चाहँदैनन् र यसले गर्दा उनीहरू परमेश्वरको इच्छा पालन गर्नदेखि पछि हट्दछन्। नयाँ ख्रीष्टियन हुँदा मैले यो कुराको सामना गर्नुपरेको थियो; मेरो लामो कपाल काट्नु परमेश्वरको इच्छा हो भनेर मलाई थाहा थियो तर मेरो “शान” घट्छ भनेर म ढिलासुस्ती गर्दैथिएँ। धेरैजना ख्रीष्टियन युवतीहरू भद्र र नारीलाई सुहाउने प्रकारले वस्त्र पहिरन इन्कार गर्दछन् किनकि तिनीहरू परमेश्वरको भन्दा मानिसको डर मान्छन्। यो ठूलो मूर्खता हो। हामी यस संसारमा उहाँदेखि शर्माउँदछौं भने उहाँ अर्को संसारमा हामीदेखि शर्माउनुहुन्छ भनेर येशूले चेताउनी दिनुभयो (मर्कूस ८:३८)।
मोशाले आफ्नो युवावस्थाको एउटा घडीमा आइपुगेपछि (“उमेरदार भएपछि”) एउटा ठूलो निर्णय गरे। उनी फारोका छोरो कहलिएका थिए जो त्यसबेलाका सबैभन्दा धनी र शक्तिशाली राजा थिए। मोशाले आफ्नो सांसारिक भविष्यलाई हेर्दै धनी र शक्तिशालीहरू, मोजमज्जाको पछि लाग्नेहरूको भाग्यलाई रोज्न सक्दथे तर उनले तिरस्कृत, दासत्वमा रहेका यहूदीहरूको भाग्यलाई आफ्नो भाग्य बनाउने निर्णय गरे। उनले परमेश्वरको वचनद्वारा पछिसम्मको भविष्यलाई हेर्दै यो बुद्धिमानी निर्णय गरेका हुन्। उनले पछिको अर्को जीवनलाई हेरे अनि ख्रीष्टलाई अँगालेको खण्डमा यस जीवनमा दुःखकष्ट पाइने अनि ख्रीष्टको अनन्त राज्यमा धनसम्पत्ति पाइने, तर यदि फारोलाई अँगालेको खण्डमा उनले “थोरै समयसम्म पापको मोजमज्जा” भोग्न पाउने र त्यसपछि अनन्तसम्म उनलाई पछुतो हुने कुरा उनले देखे।
हरेक युवा विश्वासीले मोशाको बुद्धिमानी नमुनाको अनुसरण गर्नुपर्छ। उसले आफैलाई सोध्नुपर्छ, “मैले यो निर्णय गरें भने पछि गएर के हुनेछ? अनन्तसम्म यसले के कस्ता नतीजाहरू ल्याउनेछन्? यस व्यक्तिलाई विवाह गरें भने; त्यो पेशा अँगालें भने; फलानो शिक्षा हासिल गर्नपट्टि लागें भने; फलानो देश गएँ भने; त्यो पार्टीमा सहभागी भएँ भने; फलानोसित मित्रता बढाएँ भने; त्यो टी.भी. किनें भने; त्यो सङ्गीत सुनें भने; यदि इन्टरनेटमा देखिने कुराको विषयमा बेहोशियारी भएँ भने; यदि मैले आफ्नो हृदयलाई संसारको प्रेममा फसाएँ भने?
जुनबेला हामी थकित र निराश हुन्छौं र भारी परीक्षा भएर गइरहेका हुन्छौं त्यो कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्ने समय होइन अथवा हामीले पहिल्यै गरिसकेका निर्णयहरूलाई अदलबदल गर्ने समय पनि होइन। अय्यूबलाई विचार गर्नुहोस्। उनले आफ्नो परीक्षाको घडीमा परमेश्वरलाई सरापेनन्, तरैपनि उनले परमेश्वरलाई शङ्का गरे र भविष्यको सान्त्वना र आशिषको सम्बन्धमा उनले कतिपय घडीहरूमा आफ्नो विश्वास गुमाए। आत्मिकरूपमा र भावनात्मक रूपमा उनले आफ्नो बाटो गुमाए (अस्थायी रूपमा)। भनिएको छ, “अन्धकारमा त्यस कुरालाई शङ्का नगर्नुहोस् जुन कुरालाई परमेश्वरले तपाईंलाई ज्योतिमा देखाउनुभएको थियो” अनि मैले यो कुरा धेरैपटक बुद्धिमानी सल्लाहको रूपमा पाएको छु। धेरैजाना व्यक्तिहरूले निराशाका समयहरूमा मूर्ख निर्णयहरू गरेका छन्, आफ्नो शिक्षासमेत बदलेका छन्। जेम्स रबिन्सन एकताका साहसी ब्याप्टिष्ट प्रचारक थिए, तर एउटा क्यारिज्म्याटिकलाई उसका हातहरू उनीमाथि राखेर “दुष्टात्माहरू धपाउन” दिएको बेलामा उनले झूटा शिक्षालाई अँगाले। ज्योति चम्किलोसँग बलिरहेको समय नआएसम्म पर्खनु बेस हुन्छ जुनबेला हाम्रा विचारहरू निर्मल हुन्छन्।
प्रभुलाई पर्खने काममा हामीले ध्यान दिनुपर्ने त्यहाँ दुईटा बाइबलीय सिद्धान्तहरू छन्: स्थायी शान्तिको सिद्धान्त र गडबडरहितताको सिद्धान्त। यी दुई सिद्धान्तहरू १ कोरिन्थी १४:३३ मा पाइन्छन्। जब त्यहाँ शान्ति छैन र त्यहाँ गडबड छ, हामी होशियार हुनुपर्छ र उक्त निर्णयमा हामी हामफाल्नुहुँदैन। परमेश्वरबाटको बुद्धि सधैं शान्तिमय (“मिलनसार”, याकूब ३:१७) हुन्छ। परमेश्वरले सधैं हर प्रकारले शान्ति दिनुहुन्छ (२ थेस्सलोनिकी ३:१६)।
“डराउनेहरू” आगोको झीलभित्र जानेछन् भनेर कुन पदले बताउँछ?
मोशा कसरी “जो देखिनुहुन्न उहाँलाई देखेजस्तै गरी” हिँड्न सके?
परमेश्वरको बुद्धि सधैं शान्तिमय (“मिलनसार”) हुन्छ भनेर कुन पदले बताउँछ?
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-04 10:34:022020-11-13 16:25:21जीवनमा बुद्धिमानी निर्णयहरू कसरी गर्ने? (भाग ३)
जीवनमा बुद्धिमानी निर्णयहरू...ख्रीष्टको महान् आज्ञा